डा. सुदिप केसी बने चितवनकै पहिलो युरोलोजिष्ट सह–प्राध्यापक
चितवन, १ असार । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) भरतपुरमा कार्यरत डा. सुदिपराज केसी चितवनकै पहिलो यूरोलोजिष्ट सह–प्रध्यापक बनेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले डा. केसीलाई सहप्राध्यापकमा बढुवा गरेपछि उनी जिल्लाकै पहिलो यूरोलोजिष्ट सह–प्राध्यापक बनेका हुन् ।
युरोलोजीमा एमसिएच गरेको दुई बर्षपछि डा. केसी उपप्रध्यापकबाट सह–प्राध्यापकमा बढुवा भएका हुन् । उनले युरोलोजी विषयमा एमएस गर्दै गरेका एक जना विद्यार्थीलाई आफूसँगै राखेर पढाउन पाउँछन् । विगत ११ बर्षदेखि डा. केसीले चितवनमा रहेर युरो सम्बन्धि बिरामीहरुलाई सेवा दिँदै आएका छन् ।
अति विशिष्ट सेवाका रुपमा लिइने युरोलोजी सेवा पुरानो मेडिकल कलेज, नयाँ मेडिकल कलेज र क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध छ । चितवनमा पिसाब, पत्थरी, मृगौला, प्रोष्टेटका बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गएको भन्दै डा. केसीले सेवा पनि विशिष्टिकृत हुँदै गएको बताए ।
अझै पनि मृगौला, प्रोष्टेट र त्यसमा हुने क्यान्सर सम्बन्धि बिरामीहरु विशेषज्ञ चिकित्सकसँग आइनपुग्नु एक खालको समस्या रहेको डा.केसीको भनाइ छ ।
Tagsडा. सुदिपराज केसी यूरोलोजिष्ट सह–प्रध्यापक